Fitifirana olona :: Niaro ireo zandary tany Tsaratanàna ny jeneraly Ravalomanana • AoRaha
Faritra • Tranga samihafa
Fitifirana olona Niaro ireo zandary tany Tsaratanàna ny jeneraly Ravalomanana
Nandratra olona iray tamin’ny alalan’ny tifitra ireo zandary, tany Tsaratanàna, tamin’ny alin’ny 25 febroary lasa teo nandritra ny fisafoana nataon’izy ireo. Rehefa tonga tany an-toerana ny Praiminisitra sy ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny mpitandro filaminana dia nitaraina tamin’izy ireo ny havan’ilay lehilahy voatifitra. Niaro ireo zandary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Ravalomanana Richard, satria fantatra fa olona efa nosamborina ary voatazona tao amin’ny Borigady indroa ilay lehilahy saingy nitsoaka foana ka izao izy voatifitra tamin’ny tongony izao.
“Ny ato amin’ny Zandarimaria dia mankasitraka ny zandary miasa. Izay manao ny asany araka ny tokony ho izy dia omenay fankasitrahana ary arovanay mihitsy. Izay manao hadalana miray tsikombakomba amin’ny ratsy kosa dia atosikay hiala ato amin’ny zandarimaria ka hatolotray ny Fitsarana. Ity tranga tany Tsaratanàna ity dia tena nanao ny asany ireo zandary ary manana ny traikefany satria tany amin’ny tongony no nitifiran’izy ireo ilay olona teo am-pandosirana. Izay no niarovako ireo zandary teo imason’ny Praiminisitra”, hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, omaly.
Ankoatra an’io dia fantatra ihany koa fa nahazo sitraka tamin’ity Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena ity ireo zandary miasa any an-toerana ka nisy ny fanomezana vola azy ireo ho fampaherezana amin’ny asany. “Tsy maintsy ho ampiana ihany koa ireo zandary miasa any Tsaratanàna sy any amin’ireo kaominina manodidina fa vitsy loatra”, hoy ihany ny jeneraly Ravalomanana Richard.
Momba ny fakàna an-keriny dia niantso ireo izay manam-baovao momba ny lehiben’ireo jiolahy antsoina hoe : Del na Tersa ny zandarimaria fa homena tambiny roa tapitrisa ariary izay manampy amin’ny fisamborana azy. Nanome toky ny zandarimaria fa ho arovana toy ny anakandriamaso ny mombamomba izay olona manome vaovao.
Voina tamin’ny oram-be Mpianaka namoy ny ainy nihotsahan’ ny trano tany Maevatanàna
Fanafihana teny Ambohidrabiby Notetezin’ny jiolahy ireo trano efatra tamina fokontany roa
Fanodinkodinana « solom-pen’akoho » Naiditra am-ponja ny talen’ny fampianarana iray teo aloha
Fampandrian-tany nampidi-doza Miaramilan’ny Acmil natelin’ny rano
Raharaha fakana ankeriny :: Manamboninahitra zandary eny amin’ny Primatiora voasambotra
Fanafihana sy herisetra :: Tratra ireo nanolana mpianaka teny Anjanahary
Vokatry ny oram-be Tafakatra roa amby telopolo ireo maty, an’hetsiny no tra-boina